Nyocha banyere mobiles, smartwatches, tablet, ngwa, ngwa, egwuregwu, ... | Gam akporo (Peeji nke 2)
Anyị enweela ike nwalee Xiaodu's Du Smart Buds, ekweisi ekwe ntị na ihe niile anyị nwere ike ịtụ anya na ọnụ ahịa na -atọ ụtọ
Anyị anwalela Tronsmart Onyx Apex mkpọtụ na -arụ ọrụ na -akagbu ekweisi, ahụmịhe na -ege ntị na paịlị nwere ọnụ ọnụ karịa.
Ihe ngosi gam akporo SmartGaGa maka PC dị mma, onye nomi nke dabara n'ahịa maka kọmputa nwere obere ego.
Anyị na-eleba anya na Huawei's FreeBuds 4, ọzọ nwere ANC yana imepe emepe.
Super EQ S1 nọ ebe a, ekweisi "n'elu ntị" ikuku na -enye ahụmịhe onye ọrụ na -eju afọ.
Huawei P50 Pro bụ ugbu a otu n'ime ekwentị kachasị mma maka ịse foto na ịdekọ vidiyo, ekele maka igwefoto ya dị elu.
Anyị anwalela Vacos Cam IR, igwefoto onyunyo nwere batrị nwere ike ịgbaji, ezigbo usoro nchekwa ụlọ yana ọtụtụ.
Chọpụta anyị Realme GT Master Edition, ngwaọrụ ejiri okpueze nke anyị marala.
Anyị enweela ike nwalee smartwatch maka ụmụaka nwere njikwa nne na nna, Xplora X5 Play, uru maka ụmụaka yana nchekwa maka ndị nne na nna
Anyị enweela ike ịnwale HAYLOU RS3, smartwatch nke na-ewetara anyị ihe niile anyị chọrọ na-etinyeghị nnukwu ego.
Anyị anwalela Redmi Buds 3 Pro, ekweisi ga-enwe ike iru ahịa kachasị elu n'ahịa n'oge na-adịghị anya
Anyị na-enyocha igwefoto na Realme GT ọhụrụ iji chọpụta ma ọ nwere ike iwepụ njedebe dị elu.
Realme GT ọhụrụ bịara na njirimara ngwụcha dị elu yana ọnụ ahịa nwere oke iji kwado onwe ya dịka nhọrọ dị mma na 2021 a.
Isi olu ZMI PurPods Pro bụ ihe ịtụnanya. A imewe na ọtụtụ ndị na-amasị na a n'ezie ịrịba obodo kwụụrụ.
Anyị na-enyocha Xiaomi Mi 10 T Pro, ọnụahịa nke na-achọ ihu ọnụahịa nke njedebe dị elu ma na-atọ ntọala nke uru maka ego na mpaghara a.
Xigmer Lunar bụ smartwatch nke nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye maka obere. Ikwesighi imefu ego iji nweta ya niile.
Anyị na-enyocha ọhụụ ọhụụ ọhụrụ Yeedi 2 ma kọọrọ gị ihe ahụmịhe anyị nwere na ngwaọrụ a zuru oke.
Oge a ka anyị nwalere HAYLOU LS05S, smartphone nke ụlọ ọrụ ọzọ nke Xiaomi na-enye atụmatụ dị larịị na oke ọnụ ọnụ.
Mibro Color Smartwatch na-agbaji ahịa maka smartwatches dị ọnụ ala. Ihe niile ị chọrọ na a wearable ihe na-erughị 30 euro.
Anyị nwere Realme 8 ọhụrụ n'aka anyị ma anyị nyochaa ya nke ọma iji gwa gị ihe ọrụ njirimara anyị zuru ezu dị.
Anyị anwalewo Wiko View 5 Plus, ihe atụ ọzọ doro anya na ọ dịghị mkpa iji nnukwu ego iji nweta smartphone na ihe niile
The Honor Band 6 na-abịa na iji smartwatch atụmatụ dị ike na ọnụ ahịa smartband. Ihuenyo agba na izu 2 nke nnwere onwe
Oge a anyị enweela ike ịnwale POCO M3, otu n'ime ekwentị ndị a kara aka ka ọ bụrụ onye kacha ere ahịa n'etiti etiti.
Anyị nwere tebụl Xiaomi Mi 11 ọhụrụ, ngwaọrụ "elu" nke na-abịa ịsọ mpi na ndị kachasị mma n'ahịa, ọ ga-abụ ọnụ ahịa ya?
Wiko View 5, ngwaọrụ tozuru etozu nwere igwefoto quad na batrị 5000 mAh nwere ike ịnye anyị ụbọchị atọ nke nnwere onwe.
Nyocha Cubot C3 smartwatch
Anyị enweela ike ịnwale ọhụrụ Cubot smartwatch, Cubot C3. A siri ike na-eguzogide ọgwụ wearable ike nke na-anagide gị mgbe niile.
Analysis Home Nche igwefoto Imilab C20
Anyị enweela ike ịnwale igwefoto onyunyo vidiyo Imilab C20, ngwaọrụ ị na-achọ iji nyochaa ihe kachasị gị mkpa
Imilab KW66 smartwatch nyocha
Imilab KW66 bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị nke sitere na Xiaomi. Ka na-achọ ezigbo smartwatch?
Blulory BW11 Smartwatch Nyochaa
Anyị enweela ike ịnwale Blulory BW11, ihe ọhụrụ ọzọ nwere ihuenyo gbara gburugburu, imepụta akọ na nnwere onwe dị mma.
Xiaomi Mibro Ikuku nyocha smartwatch
Anyị anwalela otu smartwatches dị ọnụ ala na ahịa nke sitere na Xiaomi, na Mibro Air, ọtụtụ maka obere
Anyị na-enyocha ngwaahịa ọhụrụ Baseus abụọ
Na Androidsis anyị na-aga n'ihu ịnwale isiokwu na Ngwa ndị metụtara gam akporo anyị. Abọchị ole na ole anyị nweela ike ịnwale di na nwunye ...
Elepods X wireless ekweisi nyochaa
Anyị enyochala igwe ekwe ntị ọhụrụ site na Elephone: Elepods X, nhọrọ nwere nkagbu mkpọtụ na-arụ ọrụ
Nyochaa Energy Sistem igbe mepere emepe 5+
Anyị anwalela Igbe Enyi Energy Sistem igbe 5+, igwe okwu na-ekwu "ka ọ gaa" yana ike yana nnwere onwe ịhapụ
OneOdio A10 na OneOdio Fusion A70 ekweisi nyocha
Anyị tụlere ekwe ntị ekwe ntị ekwekọghị ekwekọ ọhụrụ nke OneOdio abụọ, Fusion A70 na A10, kedu nke ị ga-ekpebi?
Nyochaa WIKO Y61, bụ isi ama ama ama ama
Anyị anwalela WIKO Y61 ọhụrụ, smartphone nke dị na ọkwa ntinye. Maka ihe na-erughị € 100 ọ bụ ọrụ 100%.
Lamnodo Vast Pro Dual 1080P ọhụụ ọhụụ usoro nyocha
Anyị anwalela usoro ọhụụ abalị maka ụgbọ ala Lanmodo Vast Pro Dual, ngwaọrụ dị mma maka ọnọdụ ọhụhụ dị ala.
Nyochaa OneOdio Studio na Studio Pro
Anyị anwalela nhọrọ abụọ ọzọ na-adọrọ mmasị site n'aka OneOdio, Studio na Studio Pro, ị na-achọ mma na ekweisi dị ọnụ ala?
Poco F2 Pro 5G, ahụmahụ mgbe ụbọchị 20 jiri
Ihe ekwere na nkwa bu ugwo, na Androidsis anyi choro inwale ihe di omimi iji nwee ike iwetara gi ihe omuma anyi ...
RAMPOW, ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa na nhọrọ dị iche iche
Anyị anwalela 3 RAMPOW chaja na teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa na njikọta dịka mkpa gị, nke bụ maka gị?
Nsọpụrụ 9A: Nbudata na nyocha miri emi
Sọpụrụ, ụlọ ọrụ Huawei raara onwe ya nye iji bulie ogo-oke ọnụ ahịa na-eju anyị anya na ekwentị dị oke ọnụ, Honor 9A.
Nnyocha nke CAT S52, «ekwentị rugs» nke na-adịghị ka ya
Anyị enweela ike ịnwale CAT S52, ekwentị siri ike na-eguzogide ọgwụ nwere ọdịdị dị mma yana yana ama ama ama ama.
Poco F2 Pro 5G, unboxing na mbụ echiche [Na]
Poco F2 Pro 5G, ngwaọrụ nke hapụrụ ntakịrị ihe dị ọnụ ala mana nke ahụ ahapụla anyị mmetụta dị egwu.
Xiaomi Redmi Rịba ama nyocha 9 Pro
Anyị anwalewo Xiaomi Redmi Rịba ama 9 Pro, Xiaomi ọzọ kacha mma kacha achọta dị elu ma pụta ìhè n'etiti smartphones n'etiti.
Anyị na-ahapụ gị nyocha nke otu n'ime nnukwu ndị na-egosipụta ọhụụ ọhụrụ, Honor 9X Pro, smartphone na-enweghị Google, nwere ike ihe niile.
Nyocha na nyocha nke ekweisi AUKEY
AUKEY na-ewetara anyị ụdị ekweisi abụọ nke TWS, EP-T21 na EP-T20, nke yiri ya ma dị iche, ma nhọrọ dị mma.
Uru-maka-ego ngwa: Sọpụrụ Magic Earbuds na MagicWatch 2
Anyị na-anwale Honor Magic Magic 2 (42mm) na Magic Earbuds na anyị ga-agwa gị banyere ahụmịhe anyị.
Xiaomi Redmi Rịba ama 8 Pro, nyocha na echiche
Anyị nwere na tebụl nyocha anyị Xiaomi Redmi Rịba ama 8 Pro, vitamin nke otu n'ime usoro ngwaọrụ kacha ere.
Igwefoto OnePlus 8 Pro dị n'elu 10 taa [Nyochaa]
DxOMark etinyela igwefoto OnePlus 8 Pro. Ọ bụ n'ime 10 kacha elu nke ogo nyiwe, dịka otu kachasị mma.
Anyị nọ ebe a iji wetara gị nyocha miri emi nke Xiaomi Mi Note 10, gụnyere arụmọrụ na ule igwefoto.
Ntughari nke Tronsmart T6 Plus nke emelitere abia na ozi di nkpa na otutu uzo. 360 ogo ụda, 40 W ike na NFC njikọta.
Xiaomi Mi Rịba 10 - Mmetụta mbụ anyị (Na)
Anyị na-ewetara gị igbe mbata na echiche izizi anyị nke ngwaọrụ etinyegoro ezigbo ego.
Anyị enweela ike ịnwale egwuregwu 6 nke Energy Sistem, ekweisi na-eguzogide ọgwụ na IPX7, ezigbo ndị enyi maka ịme egwuregwu
Anyị enweela ike ịnwale NEBULA Capsule, ụdị mpempe akwụkwọ nke ihe niile anyị nwere ike ịrịọ site na projector, nwere oke soda.
Anyị na-arụ ọrụ na Huawei P40 Pro ọhụrụ maka nwa oge ma anyị na-ewetara gị nyocha dị omimi na ule igwefoto.
Huawei P40 Pro - Unboxing na mmetụta mbụ
Ya mere, nọrọ ma chọpụta anyị igbe na ule mbụ nke Huawei P40 Pro nke juru anyị anya nke ukwuu ma nye anyị ihe anyị ga-ekwurịta,
Samsung Galaxy S20 - Nnwale igwefoto na nyocha miri emi
Anyị na-ewetara gị ule igwefoto nke Samsung Galaxy S20 ọhụrụ na ahụmịhe anyị mgbe anyị nyochachara ụgbọ mmiri ọhụụ ọhụrụ nke Samsung.
Samsung Galaxy S20 - Unboxing na Mmetụta Mbụ
Anyị na-eme "unboxing" nke Samsung Galaxy S20 5G ọhụrụ ma anyị na - agwa gị ihe mbụ anyị chere banyere njedebe dị elu nke oge a bụ.
Energy Sistem mepere emepe 1 ekweisi nyocha
Anyị anwalela 1 nke mepere emepe site na Energy Sistem, otu n'ime ụzọ ndị dị ọnụ ala karịa ka ị ga-eji kelee kebul ozugbo.
Isi okwu nyocha HolyHigh EA2
Taa, anyị laghachiri na ibu na nyochaa metụtara ụda na egwu. Ọzọ anyị enweela ike ịnwale ...
Mixcder E10 ekweisi nyochaa
Anyị na-ekwu maka ekweisi Mixcder E10, otu isi ihe dị mma na-enweghị ịchụ arụmọrụ. Qualityda dị mma na nhazi kacha mma.
Realme X2 Pro, abiala "igbu ndi Refeyim" [Nyochaa]
Anyị na-anwale Realme X2 Pro maka izu ole na ole, njedebe nke na-abịa iji guzo na Xiaomi ma mee ka ị chee ma ọ bara uru ịkwụ ụgwọ.
Galaxy Watch nọ n'ọrụ site na nyocha TOUS
Taa, anyị na-ekwu maka igwe pụrụ iche maka ụmụ nwanyị na-ege ntị. Anyị enweela obi ụtọ iji nwee ike ịnwale n'oge ...
Mate 30 Pro, nyocha miri emi nke Huawei kacha "pro"
Chọpụta anyị na nyocha miri emi nke Huawei Mate 30 Pro yana ihe nzuzo ya na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ọ bara uru.
Conga 4090, a robot agụụ na sikrob na laser ihe mmetụta
Nọnyere anyị iji chọpụta ma ọ bụrụ na Conga 4090 a kwesịrị ya n'ezie, kedụ isi atụmatụ ya bụ ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịzụta.
Nyocha Arbily X-Buds Headphone
Taa, anyị na-ekwu maka Arbily ọhụrụ, ekweisi X-Buds na usoro bọtịnụ AirPods nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye na ọnụ ahịa na-atọ ụtọ.
Onye na-agba ịnyịnya ígwè na-ebi ndụ 2: Onye na-agba ịnyịnya ígwè zuru ezu maka gam akporo
Chọpụta ihe niile gbasara Live Cycling Manager 2, egwuregwu egwuregwu ọhụụ ị ga - eji jikwaa otu ịgba ịnyịnya gị ma dị ugbu a na gam akporo.
Nyocha Mbuynow Igwefoto IP, usoro nchekwa gị na-enweghị ụgwọ
Anyị na-agwa gị ihe anyị chọtara igwefoto IP Mbuynow, sistemụ nchekwa kachasị elu maka ụlọ maka onye ọ bụla.
[Video] Nyochaa Samsung Galaxy Note 10 + mgbe ọnwa 2 jiri: mkpanaka nke na-adaba n'ịhụnanya kwa izu
Anyị nyochaa na vidiyo na ntinye a bụ Samsung Galaxy Note 10 +, ekwentị zuru oke nke na-apụta maka nnukwu ihuenyo ya, ịdị arọ ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Huawei Watch GT 2: Nnyocha nke ọhụụ ọhụụ ọhụụ
Chọpụta karịa gbasara nyocha a nke Huawei Watch GT 2 nke akara ndị China na anyị enweela ike ịnwale izu ndị a ma anyị hapụrụ gị echiche anyị banyere ya.
OUKITEL C17 Pro nyocha
Anyị ejirila OUKITEL C17 Pro, smartphone nwere ike ịnye gị igwefoto atọ, 6,35 "ihuenyo na 4GB / 64GB maka ihe na-erughị € 130, ọ nwere onye na-enyekwu?
New video-ngalaba na nke anyị na-egosi gị ndị Ngwa na-adịghị atụ aro ka wụnye na anyị Androids maka dị iche iche ihe.
LG G8s ThinQ njikwa njegharị na njikwa na -emepụta usoro
Ka anyị leba anya na LG mbụ nke enwere ike ịchịkwa na-enweghị imetụ ya aka ma gụnye ọmarịcha mma nke ngwaike anyị niile maara.
[Video] Ihe ngosi mbụ nke Samsung Galaxy Note10 +
N'ime ihe ngosi mbụ ndị a, anyị na-egosi ihe pụtara isi ihe dị iche na ahụmịhe nke Note10 gbakwunyere.
Video Review SUDIO TOLV, ekweisi ikuku na nnwere onwe nke 35 Hrs !!
Ihe nlere vidiyo na Spanish nke SUDIO TOLV, ekweisi ikuku na-enweghị ego nke oke ọchịchị ya dị oke mkpa nke awa 35 bara uru.
ANNKE 1080P nyocha igwefoto
Anyị enweela ike ịnwale igwefoto wifi ANNKE 1080P, teknụzụ nyocha ọfụma, ọhụụ abalị na ogo ndekọ maka obere pere mpe.
[VIDEO] Nkọwa miri emi nke Samsung Galaxy S10 + vs Galaxy Note 10 +: duel nke ndị eze
Ntụle vidiyo nke Samsung Galaxy S10 + megide Galaxy Note 10 + na nke ahụ na-egosi etu ụlọ ọrụ Korea si mee afọ a.
Arbily ID205 smartwatch nyocha
Anyị nwalere smartwatch nke Arbily ID205 maka izu ole na ole, elekere zuru oke dị ka nke kachasị na ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri. Ihe nlere anya ị na-achọ.
Onye ọhụụ GPS na-enweghị n'efu na nbudata map n'efu maka igodo na-anọghị n'ịntanetị
Nnukwu onye na-agagharị GPS n'efu, na nbudata map n'efu ka ị nwee ike iji ya dị ka onye na-agagharị na-anọghị n'ịntanetị na-etinyeghị data.
Nke a bụ ihe kachasị mma igwefoto ọsọ ọsọ maka gam akporo. (Dakọtara na GPS niile, ọbụlagodi Google Maps)
Igwefoto igwefoto kacha mma kacha mma maka njedebe gam akporo. Ihe ngosi nke kwekọrọ na Maps, Waze na ndị ọkwọ ụgbọ ala GPS niile.
Ihe nyocha kachasị mma maka ndị agadi bụ n'efu
Anyị na-akwado ndị kasị mma obubata maka ndị agadi, a kpam kpam free igba egbe na-enweghị ụdị ọ bụla nke mgbasa ozi ma ọ bụ na-ngwa ịzụrụ.
Nyocha Wiko View 3 Pro
Wiko ohuru ohuru ohuru, ihe ngosi 3 Pro, na mgbakwunye na ịbụ ọmarịcha ama mara mma na anya na igwefoto ya atọ, na-enye arụmọrụ pụrụ iche
Xiaomi Mi 9 - Apụghị inye ihe maka obere ihe na ọkwa dị elu [AKW ]KWỌ]
Anyị nwere Xiaomi Mi 9 n'aka anyị iji nyefee ya na nyocha miri emi, chọpụta njirimara ya na ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ya.
Anyị na-alaghachi na Androidsis site na nyocha akụkọ, ị maara na anyị chọrọ ịme ka ị mara maka ngwaọrụ ndị kachasị ọhụrụ bụ ...
LG V40 ThinQ - Ìhè na onyinyo n'agbanyeghị igwefoto 5
Anyị na-akpọ gị ka ị sonyere anyị ọzọ na nyocha a zuru oke nke anyị mere nke LG V40 ThinQ, nke nwere ọnụ ọgụgụ nwere ọtụtụ ọkụ na onyunyo.
OUKITEL C15 Pro nyocha
OUKITEL C15 Pro bụ smartphone dị oke ọnụ ala, na-enweghị ịhapụ ihe ọ bụla, yana ihe na-erughị € 100, ngwaọrụ mara mma nke nwere ike ịba uru ma dị irè
Analysis Ezviz CTQ3W, igwefoto onyunyo wifi
Anyị enweela ike ịnwale igwefoto onyunyo wifi Ezviz n'èzí, ogo onyonyo, ọhụụ abalị yana kwa ụda mkpu na ọkụ na-egbochi.
Chọpụta anyị na nyocha miri emi nke Black Shark 2, njedebe egwuregwu nke kacha mma maka gam akporo, anyị tinyere ya n'ule.
Xiaomi Mi9 VS Huawei P30 na a duel duel iji hụ nke n'ime ihe njedebe abụọ dị elu na-agba ọsọ ọsọ karịa usoro mkpọchi ihuenyo
Anyị nwere n'aka Black Shark 2, mbipụta nke abụọ nke ekwentị kacha egwu egwu, anyị na-ewetara gị mbata na mbido mbụ anyị.
Ọtụtụ ule gaa Huawei P30 VS P20 PRO iji hụ ma ọ bụrụ na ọdịiche dị na ike mgbaàmà na Wi-Fi ọsọ na ịgụ na ide na ebe nchekwa.
Anyị nwere n'aka anyị na nkwojiaka ọhụụ Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ, nọnyere anyị ma anyị na-eme nyocha siri ike.
Anyị na-eche ihu Huawei P30 VS P20 PRO maka gị ka ị wee nwee ike iji ya mee ihe n'ezie ma ọ bụrụ na mgbanwe dị n'etiti ọdụ ụgbọ elu Android abụọ a kwesịrị ya.
Ike Sistem Style 6 ekweisi nyocha
Anyi nwalere ekwe ekwe Stistem Style 6, ihe ozo na AirPods nwere ihe mbu nke 100%, otutu inye ya obere
Energy Sistem Music Box 9 okwu nyocha
Anyị enweela ike ịnwale igwe okwu Music Box 9 site na Energy Sistem, yana ike ya na ọrụ ọkachamara ya juru anyị anya.
Anyị na-enyocha ihe ọhụrụ Xiaomi Redmi Rịba ama 7, ihe atụ doro anya nke ihe Xiaomi na-enye, uru kachasị mma maka ego ị ga-ahụ
N'oge ngosi nke P30 Series nke mere na Paris na na ị nwere ike iso anyị, ụlọ ọrụ ahụ ...
Ihe nchịkọta akụkọ HTML kachasị mma maka gam akporo
Ihe nchịkọta akụkọ HTML kachasị mma maka gam akporo na nke m na-akụzikwa gị otu esi echekwa ibe na HTML na usoro mhhtml maka ịlele na ntanetị.
Hisense Inifinity H12: A ngwaike ziri ezi na mma imewe [Review]
Nyocha nke Infinity H12 nke Hisense, nke nwere agba mara mma ma kwụọ ụgwọ na ọkwa ngwaike nke hapụrụ anyị ịchọ karịa n'akụkụ ụfọdụ.
Nnyocha igwefoto Huawei P30 Pro, yabụ ị ga - ahụ n'onwe gị ma ọ bụrụ na anyị na - elele igwefoto kachasị mma enyerela na ekwentị mkpanaaka.
Chọpụta nkọwa niile nke Huawei P30 Pro nke karịrị igwefoto dị egwu na ọtụtụ nnwere onwe, ọ kacha mma?
Anyị nwere ọhụrụ Huawei P30 Pro na anyị ga-agwa gị ihe mbụ anyị chere kemgbe na-anwale ngwaọrụ a dị egwu.
Oge kachasị mma nke oge a bụ n'efu !!
Vidiyo nke m na-egosi gị ihe taa bụ ngwa ihu igwe kachasị mma, ngwa mara mma amụma ihu igwe.
Esi atụgharị gị gam akporo n'ime a metal detector
Anyị na-enyocha ma ọ bụrụ na ngwa nchọta ihe igwe maka gam akporo na-arụ ọrụ nke ọma. Nwere ike anyị gbanwee Android anyị ka ọ bụrụ igwe nchọ?
Otu esi ahazi gam akporo ka anyi n’eji nweta mmeghari oru ohuru
Vidiyo nke m na-egosi gị ngwa nke anyị ga-ahazi gam akporo mgbe anyị ga-enwe ohere ịnweta na ihuenyo.
Kedu nke m taa bụ otu ọdụ ụgbọ mmiri kacha mma nke Pixel Launcher nwere ụdị ihe eji agba ojii na nri Google Ugbu a na-azụ.
Etu ị ga-esi mee ka gam akporo gị banye na mita ọkachamara n’efu
Anyị na-egosi gị otu ị ga-esi mee ka ọnụ ahịa gam akporo bụrụ mita ọkachamara, anya, ogologo, igwe elekere na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nchọgharị weebụ kachasị mma maka gam akporo, nke kachasị ọsọ na nke zuru oke, mgbe ahụ ị gaghị echefu vidiyo vidiyo na-esonụ.
A nnọọ mma ọzọ ka Google Nọgidere dakọtara na mkpisiaka na Black AMOLED interface
A na-akpali akpali ọzọ ka Google Nọgidenụ na nke ya Black AMOLED mode, Ọchịchịrị mode na nchebe ya site PIN ma ọ bụ mkpisiaka ga-pụta ìhè.
Huawei P Smart (2019), ụdị kachasị ọhụrụ na ntinye ntinye ya na igwefoto abụọ na ihu ihuenyo niile, anyị ga-enyocha ya n'ụzọ miri emi.
Nyochaa Umidigi Otu MAX, ihuenyo niile maka ihe na-erughị 200 ego !!
Mgbe ihe karịrị otu izu nke iji Umidigi One MAX kpụ ọkụ n'ọnụ, dịka anyị kwere nkwa na unboxing ...
Anyị na-enyocha ekweisi ikuku na Mixcder E9: uru kachasị mma maka ego na ahịa
Jikere maka ọmarịcha ahụmịhe ụda na Mixcder E9 ekele maka Nkagbu Noise na-arụ ọrụ maka ezigbo ekweisi Bluetooth.
Uche Chukwu ga eme - Rosemary Chukwu Onumaegbu Niile ihuenyo 6.3 for nke na-erughị € 200 !!
Vidio nke m wetaara gị ebugharị na mbido mbụ nke Umidigi One Max, ọmarịcha gam akporo gam akporo n'okpuru 200 ego.
Ihe ọzọ na Google Fit a la Black Amoled
Ngwa ọzọ maka Google Fit a la Black Amoled nke iji gosipụta ịdị mfe ya na njikarịcha iji wepu usoro ihe dị ole na ole.
Nyochaa ụlọ elu Energy Sistem Tower 2 Style Bangkok
Anyị enweela ike ịnwale ụlọ elu sono Energy Tower 2 Style Bangkok sono, ọgbara ọhụrụ na anya na-adọrọ adọrọ na-enye ọmarịcha ogo arụmọrụ na ike.
Nyocha Arbily T8
Anyị na-ewetara ekweisi ikuku ARBILY T8, ogo dị mma, imepụta mma na batrị 3.000 mAh nke ị nwere ike iji kwụọ ụgwọ ekwentị gị
Nyochaa OUKITEL U23
Zute OUKITEL U23, ihu igwe 6.18-inch nke nwere ọkwa, igwefoto abụọ na ihe ngosi dị egwu karịa ihe ị chere.
Ihe niile Fubo TV na-enye anyị, ndenye aha na Movistar Series na ụzọ iri na atọ ọzọ, dị ọnụ ala karịa n'ahịa
Nyocha vidiyo na echiche onwe onye banyere ọrụ Fubo Tv, ọnụ ala Movistar Series dị ọnụ ala na ahịa dị ugbu a.
Ihe ntanetị Windows ekwentị kacha mma !!
Poptel P8 nyocha
Anyị etinyela Poptel P8 na ule ahụ, "ekwentị jupụtara na nkume" na asambodo IP68 na NFC maka ihe karịrị € 100, nke kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ngwaọrụ nke abụọ na-eguzogide ọgwụ.
Amazon ikwughachi VS Google Home. Ọ bụrụ n ’ị ga-azụta otu n’ime ngwa ndị a tupu oge a, lee anya na nke a
Ọ bụrụ na ị na-eche inweta Googlelọ Google ma ọ bụ Amazon Echo, amazon a Echo VS google comparisonlọ ga-aba ezigbo uru.
Ike nyocha Smart 6 ekweisi nyocha
Anyị anwalela Energy Sistem Smart 6, ekweisi na-ejikọ ụdị "retro" mara mma na teknụzụ Enyemaka Voice ọhụrụ.
Nyochaa Huawei Mediapad M5 Lite taabụ na Stylus nke na-enweghị ihe ọ bụla ga-emere iPad anyaụfụ. Ee ee, ọnụ ahịa ya!
N'oge a, na mgbakwunye na iwetara gị nyocha vidiyo zuru ezu nke Huawei Mediapad M5 Lite, mbadamba gam akporo ọhụrụ ...
Nyochaa BLU VIVO XI +
Anyị nwalere BLU VIVO XI +, igwefoto abụọ, 6GB nke RAM, ihu ihu na ọtụtụ ndị ọzọ, eziokwu dị elu nke nso maka ihe na-erughị € 300
Motorola Otu, nyocha miri emi nke etiti a
Ebe dị n'etiti na-alaghachi na ibu n'otu oge mgbe nnukwu ụlọ ọrụ nwere ya dị mgbagwoju anya ...
SPC Baamba Gyro 4.0 bụ robot agụụ Cleaner na Alexa na Google nnyemaaka
Anyị nwalere Baamba Gyro 4.0, SPC igwe nhicha igwe na-arụ ọrụ dakọtara na Alexa na Google Assistant, nke nwekwara ngwa gam akporo.
Nyochaa OUKITEL WP1
Anyị nwalere ma tinye OUKITEL WP1 ka ọ nwalee, "ekwentị mgbanaka" nwere igwefoto abụọ, ikuku na-akwụ ụgwọ, batrị 5.000 mAh na asambodo IP68
Anyị nyochaa Wiko View 2 Go, ụdị ọnụ ala dị ala maka ihuenyo niile
Wiko View 2 Go bụ ụzọ Wiko nke iweta ihuenyo niile na ntinye ntinye, nọnyere anyị ma chọpụta ihe njirimara ya na ahụmịhe anyị na ama a.
Nyocha vidiyo miri emi nke Chuwi HiPad dị maka naanị ihe karịrị € 120
Dika m kwuchara na Unboxing na echiche mbu nke Chuwi HiPad, oge eruola ịgwa gi ...
Leaked Nokia 9 PureView Cases Kwenye 5 Igwefoto Mbido
Igwefoto 5 na azụ ga-enwe Nokia 9 PureView dị ka anyị si mara site na mkpụrụedemede silicone enwere ike iji ya na ekwentị a.
Motorola Otu, ihe ngosi izizi nke Motorola na-emebi ego a
Motorola na-alụ ọgụ na ụdị Onye ahụ, ọnụ ọgụgụ dị ike nke nwere njide ejidere na atụmatụ dị egwu. Anyị ga-agwa gị ihe mmetụta mbụ anyị nwere.
Anyị nyochaa Samsung Galaxy A7 (2018), ese foto atọ dị n'etiti
Galaxy A7 nke 2018, ọnụ nke nwere ese foto atọ na otu ọgbọ na-esote, nọrọ na anyị ma chọpụta isi ihe dị ịtụnanya na nke na-adịchaghị mma nke ama a.
Nyochaa YI 4K + Action Camera
Anyị nwalere Igwefoto Igwefoto site na YI Technology, YI 4K + nwere ike ịnye ihe pụrụ iche, ndekọ 4K na 60 fps, ịtụnanya.
E kpughere nkọwa ndị ọzọ nke Nokia 9 PureView: A gam akporo 9 Pie, ese foto ise n'azụ na ndị ọzọ
Nokia 9 PureView na-agba mmiri na ụgbụ. Oge a, ya na sistemụ arụmọrụ nke Android 9.0 yana aha aha ya: "Olympic".
POPTEL P10 Nyocha
Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara POPTEL P10, nke kachasị mma, asambodo IP68, 4 GB nke RAM, njikọ NFC na ọtụtụ ihe na-erughị € 200
TWS ekweisi tụnyere
Anyị enweela ike ịnwale ụzọ ọzọ 3 nke ụlọ ọrụ TWS na-enye anyị na ekweisi Bluetooth ya na-enweghị eriri, ị na-eche ịzụrụ otu?
Huawei Mate 20 Pro na-aga n'ihu na-elekwasị anya nke ukwuu nke ndị ọrụ ụbọchị ole na ole mgbe ...
Xiaomi 10W MAX wireless chaja nyocha
Anyị nwalere chaja wireless Xiaomi, Mi 10X Max, chaja dakọtara na ụdị ndị kachasị ọhụrụ n'ahịa na anya anyị hụrụ n'anya.
Nyochaa Umidigi Z 2 PRO
Mgbe ihe karịrị otu izu nke iji kpụ ọkụ n'ọnụ mee ihe, nke a bụ nyocha vidiyo nke Huawei P20 PRO ebe m na-agwa gị ihe ọma na ihe ọjọọ niile nke Huawei flagship na-enye anyị.
Aermoo V1 kacha mma obere ụda «waterproof»
Aermoo V1 nwere ike ịbụ oge ezumike ezumike ị na-achọ, ọkà okwu bluetooth na-enye ike, ụda dị mma na nnwere onwe dị ukwuu, yana nke ahụ nwekwara asambodo IPX6
UHANS i8 nyochaa
Nyocha nke UHANS i8, ama ama ihuenyo niile nwere 5,7 sentimita asatọ, 4GB nke nchekwa RAM, yana Sony igwefoto abụọ nke na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị. Anyị nwalere ya nke ọma iji hụ uru na ọghọm ya. Ọ bara uru?
M-HORSE Dị ọcha 2 nyochaa
Anyị nyochara ụdị nke abụọ nke ama ama kpatara ezigbo mma. M-HORSE Pure 2 dị mma n’ụzọ niile. 5,99-anụ ọhịa ihuenyo, sọrọ igwefoto, 4GB nke Ram, na ọtụtụ ndị ọzọ
Nyocha zuru ezu nke vkworld S8, ama ama a abụghị naanị mmepụta oyiri nke Samsung Galaxy S8. Ọ ga-adị na elu nke Samsung mobile? Anyị na-agwa gị njirimara, ọnụahịa na nnweta nke ọnụ ahịa China a nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye.
Nwee obere golf dịka ị na-enwetụbeghị na Golf King
Taa, anyị na-ekwu maka egwuregwu Mini Golf King, otu n'ime egwuregwu ọla edo kacha mma anyị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Play, ịghara ịsị na ọ kachasị mma, ekele ọ bụghị naanị na eserese ya dị egwu, kamakwa ohere nke igwu egwu na ntanetị na ọnọdụ dị iche iche.
Ihe mbu nke Android P Developer bu ihe di njikere
Ihe mbu nke Android P Developer Preview fọrọ nke nta ka ọ gwụ. Chọpụta karịa banyere nlele mbụ nke ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Nyochaa nke Honor 7X, smartphone nwere ihuenyo 5,93-inch, igwefoto abụọ na 4 GB nke RAM. Ọ bara uru? Tinye ma chọpụta njirimara, ọnụahịa, uru na ọghọm nke ọdụ a na nnukwu uru ego.
Ila X: Nyocha miri emi nke gam akporo naanị euro 80
Mgbe ụbọchị iri were iji Ila X, lee ihe omimi banyere ngwanrọ gam akporo nke chọrọ ịbụ onye mmepụta nke iPhone X na naanị ụgwọ 80 Euro.
Nyocha DOOGEE BL7000
Anyị nyochara DOOGEE BL 7000, smartphone nwere batrị 7060 mAh na igwefoto abụọ sitere na Samsung maka euro 150. Ngwa igwe China a ọ bara?
UHANS Max 2 bụ nnukwu ọnụ na-ekele ya na ihuenyo 6,44-inch. Chọpụta nyocha zuru oke na nkọwa niile: igwefoto 4, 4 GB nke RAM, ọnụahịa, wdg.
Nyochaa vidiyo na omimi nke Meiigoo S8, mmepụta oyiri kacha mma nke Samsung Galaxy S8 Plus
Meiigoo S8 zuru oke na nyocha miri emi nke miri emi, nke m bu ugbua kacha mma nke Samsung Galaxy S8 Plus.
M-HORSE Pure 1 Nyocha
Nyocha nke M-HORSE Pure 1, smartphone dị ọnụ ala nke nwere 5,7 "ihuenyo yana Sony igwefoto abụọ maka ihe na-erughị 100 euro, ọ bara ya?
Anyị na-enyocha Bluboo S8, etiti dị n'etiti etiti na arụmọrụ dị oke mma
Blulọ ọrụ Bluboo na-enye anyị ụdị S8, ọnụ na-agbanwe ọnụahịa ya na ezigbo uru dị ukwuu maka ụbọchị ọ bụla nke onye ọrụ ọ bụla
Leagoo na-enye anyị S8, ọnụ maka ihe karịrị 100 euro na nke ahụ na-enye anyị atụmatụ na-adọrọ mmasị na ọnụahịa nwere ezi uche.
Chọpụta Vernee M5, smartphone dị ala nke naanị € 100 na-enye anyị 4 GB nke Ram na ihuenyo 5.2-inch. Niile atụmatụ na otu Pịa.
Nyochaa Oukitel C8 ihe gam akporo 7.0 dị ọnụ ala gam akporo nke juru m anya
Lee, ahapụrụ m gị nyocha vidiyo a zuru ezu nke Oukitel C8, ọnụ na-atọ ụtọ nke ukwuu maka onye ọrụ na-achọ njedebe mbata gam akporo.
Project Dragon maka gam akporo - Nyochaa. Chọpụta ihe banyere egwuregwu a ọtụtụ egwuregwu ugbu a maka gam akporo.
N'ebe a, ị nwere unboxing tinyere nyocha tinyere eserese maka Energy Phone Pro 3, ọnụ ọnụ nke juru m anya nke ukwuu n'ọtụtụ akụkụ.
Nyochaa Nokia 6
N'ebe a, ahapụrụ m gị Ntụleghachi nkwa nke Nokia 6, ọnụahịa nke dịka ọnụahịa ya si dị n'okpuru akara ndị ọzọ nke otu ọnụahịa ahụ.
Dbọchị 30 nke TV dị ndụ n'efu na ọdịnaya na-achọ naanị Sky na-enye ya
Sky na-enye gị ụbọchị 30 nke TV dị ndụ n'efu na ọdịnaya na-achọ dị ka ihe nkiri na usoro maka ịnwale ọrụ ọhụrụ ya.
Xiaomi Mi A1 Nyochaa
Nyocha miri emi nke Xiaomi Mi A1, ọnụ na-abịa ịchịkwa etiti gam akporo na ọnụahịa dị egwu.
Vernee Thor Plus nyocha
Mmecha zuru ezu na nyocha zuru oke nke Vernee Thor Plus mgbe ọ gachara izu nke iji ọgwụ eme ihe dị ka ọdụm nke onwe m maka iji ụbọchị.
Nyocha na ule na-eguzogide nke Oukitel K10000 MAX
N'ebe a ka m hapụrụ gị nyocha na nguzogide nguzogide nke Oukitel K10000 MAX, nyocha na karịa ule niile na-eguzogide nke na-agaghị eju gị anya.
Oge a ka m chọrọ ikwu ihe m bụ doro anya na ọ dị ezigbo mma nhicha gam akporo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Nyochaa vidiyo e dere site na Oukitel K3 n'onwe ya nke m na-akọwa mmetụta m mgbe ihe dị ka ụbọchị itoolu nke iji kpụ ọkụ n'ọnụ mee ihe.
Sọpụrụ 9, nyocha na echiche
Nyochaa na vidiyo na Spanish nke Honor 9, Honor ọhụụ ọhụrụ nke dị iche na ndị na-asọmpi ya site na ịnye atụmatụ mara mma
Nyochaa MAZE Alpha 4G the 6 ″ na-enweghị okpokolo agba nke ga-eju gị anya maka uru maka ego
E kwere nkwa nyocha vidiyo zuru ezu nke MAZE Alpha, karịa 30 nkeji nke m na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe ọma niile na ihe ọjọọ niile gbasara MAZE Alpha.
Nyocha na Spanish nke Elephone P8 Mini, otu etiti etiti na-efu ihe na-erughị euro 110 na nke nwere ngwaike nke ga-eju gị anya
R-TV BOX S10, nyocha na uche
Nnyocha na Spanish nke R-TV Box S10, igbe gam akporo nke na-efu ihe na-erughị euro 70 ma ga-enye gị ohere ilele ọdịnaya multimedia na ogo 4K
Nyocha vidiyo na Bluboo S1, ọnụ ala ọzọ na-enweghị ọnụ ala nwere ezigbo mma
Nyocha zuru ezu nke Bluboo S1, mmepụta oyiri nke Doogee MIX nke ga-eju gị anya site na atụmatụ ya mara mma, nkọwapụta teknụzụ yana arụmọrụ dị ukwuu.
Nyochaa Leagoo T5
Zuru ezu video nyochaa nke Leagoo T5, a ọnụ na m nwere obi ụtọ nke ule n'ihi na ihe karịrị 15 ụbọchị na nke ahụ bụ ezigbo mma zuo nhọrọ.
Nyocha na Spanish nke LeEco LETV, ama zuru oke nke na-erughị euro 100. Ndị a bụ njirimara ya, ọnụahịa ya na nnweta ya.
Anyị na-enyocha LG Q6, nke dị n'etiti na ụdị kachasị mma ya
Oge a anyị nwere LG Q6, ngwaọrụ Fullvision nke ihu ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihuenyo niile, echefula nyocha anyị.
Moto Z, nyocha na uche
Nnyocha nke Spanish nke Moto Z, ekwentị nke na-apụ apụ maka obere ọkpụrụkpụ ya nke na-eme ka ekwentị dị mma iyi
Nyochaa Meiigoo M1, 6 Gb nke RAM na Helio p20 maka naanị 194 Euro
N'ebe a ka m hapụrụ gị nkwa nyocha ahụ nke Meiigoo M1, ọnụ ọnụ ya na 6 Gb nke RAM na Helio P20 ga-eju gị anya. Naanị maka 194 Euro !!.
Sọpụrụ 8 Pro, nyocha na echiche
Nyocha vidiyo na Spanish nke Honor 8 Pro, phablet nke onye na-emepụta Asia nke na-enwupụta ìhè nke ya site na ihuenyo QHD ya.
Nyocha zuru oke nke Ulefone Gemini Pro na Spanish ma juputara nke ọma ka ị mara ma ihe ọma na ihe ọjọọ nke Low Cost smartphone na-enye anyị.
N'ebe a, m hapụrụ gị ntụnyere n'etiti Nokia 3 VS Homtom HT37 Pro, ọnụ abụọ na-ekerịta ihe nhazi na GPU n'agbanyeghị na ọnụ ahịa dị iche.
Nyochaa Homtom HT37 PRO, ị gaghị ekwenye ihe ọ na-enye maka ihe na-erughị 80 Euro!
Lee ị nwere nyocha vidiyo zuru ezu nke Homtom HT37 Pro, ọnụahịa nke ihe na-erughị 80 Euro na-enye gị ihe niile ịchọrọ.
Na nyocha a miri emi banyere Nokia 3 M na-egosi gị otu ụzọ ntinye Nokia nke mbido n'ahịa Spanish si akpa agwa.
Blackview BV8000 Pro, nyocha na echiche
Nyocha na Spanish nke Blackview BV8000 Pro, ekwentị na-eguzogide ọgwụ nke nwere asambodo IP68 na ngwaike n'ogologo nke etiti
Huawei Watch 2, nyocha na echiche
Nyocha na Spanish nke Huawei Watch 2, Huawei smartwatch ọhụrụ nwere oghere nano SIM yana GPS jikọtara
Nyochaa Wavefun X-Pods, ụfọdụ mma ekweisi Apple Airpods maka naanị 55 Euro ma dị na Amazon Prime
Nyocha zuru ezu nke Wavefun X-Pods, ekweisi ekwe ntị na ntị, na-enweghị otu eriri na ụdị kachasị ọcha nke Apple Airpods.
Lee, ahapụrụ m gị nkwa ekwere nke Doogee MIX n'ụzọ miri emi mgbe ụbọchị iri gachara iji kpụ ọkụ n'ọnụ were m rụọ ọrụ.
Nyocha vidiyo na Spanish nke mbadamba Chuwi Hi10 Pro, ngwaọrụ nke na-arụ ọrụ na gam akporo na Windows maka ihe na-erughị euro 200
Sọpụrụ 9 Vs OnePlus 5: Nkọwa Nkọwa
Ọ bụ ụbọchị ole na ole kemgbe ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, Honor 9, ...
RHA CL750, nyocha na echiche
Nyocha Spanish maka ekweisi RHA CL750, akụrụngwa ga-enwerịrị ndị hụrụ egwu n'anya
Download Ime Anwansi Swipe Plus maka n'efu, ngwa ọrụ ga-adị oke mkpa na gam akporo gị
You chọrọ ibudata Magic Swipe Plus n'efu? Ngwaọrụ dị egwu maka gam akporo, n'ihi na ị nwere obi ụtọ, enyi, ebe ọ bụ n'efu maka ụbọchị 7.
Nubia N2, nyocha na uche
Nyocha na Spanish nke Nubia N2, ekwentị nwere ọtụtụ nnwere onwe na igwefoto dị mma, mana yana ihuenyo HD na nhazi nke na-agbada ahụmịhe ahụ.
Lee, ahapụrụ m gị nyocha miri emi nke BQ Aquaris X ka ị nwee ike ịmịnye ihe niile ọhụụ ọhụrụ nke akara Spanish na-enye anyị.
AGM X1, nke a bụ ekwentị enweghị ike ịgbagha agbagha site na AGM
Nyocha na Spanish nke AGM X1, AGM ọhụrụ nke na-apụta maka nguzogide ya dị ukwuu na nhụsianya na ọdịda na nnwere onwe dị ịtụnanya
Teclast 98 4G, nyocha na Spanish
Nyocha na nyocha na Spanish nke Teclast 98 4G, mbadamba mbata nke na-efu ihe karịrị 100 euro ma nwee njikọ 4G
Ihe ngwọta Samsung Galaxy S6 Edge Plus batrị nsogbu. Ihe ngwọta akụ na ụba ebe enwere mkpuchi batrị na ọnụego knockdown.
Nyocha vidiyo na nke Meizu M5 na Spanish, ekwentị ntinye na ezigbo nnwere onwe na ọnụ ahịa nke na-agaghị agafe euro 150
Huawei P10 Plus, nyocha na uche
Nyocha vidiyo na Spanish nke Huawei P10 Plus, ọhụụ ọhụrụ nke Huawei nke nwere otu igwefoto kachasị mma na ahịa
Sọpụrụ 6X, nyocha na echiche
Nyocha vidiyo nke Honor 6X, ekwentị dị n'etiti etiti na-egosipụta chassis aluminom, ngwaike dị ike na sistemụ igwefoto abụọ dị ịtụnanya.
Huawei P10, nyocha na echiche
Nyocha na Spanish nke Huawei P10, ekwentị ọhụrụ sitere na ndị na-emepụta Asia nke nwere ngwaike na mma mara mma
Nyocha na Spanish nke DOOGEE Y6 MAX 3D, phablet gam akporo nwere ihe ngebichi nke na-enye ohere ịmepụ ọdịnaya na 3D ma ọ bụ akụkụ atọ
Blackview P2, nyocha na echiche
Nyocha na nyocha na Spanish nke Blackview P2, ọnụ na-apụ apụ maka nnukwu batrị 6.000 mAh dị egwu nke na-enye njedebe nnwere onwe dị ukwuu
Nubia Z11, nyocha na uche
Nnyocha vidiyo nke Nubia Z11, ọkọlọtọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Eshia na nke pụtara ìhè maka atụmatụ ya dị egwu
Samsung Gear S3, nyocha na Spanish
Nnyocha vidiyo nke Samsung Gear S3, ihe ngosi smartwatch gam akporo nke na-apụ maka inye nnwere onwe dị egwu yana arụmọrụ kacha mma
Galaxy J7 2016, nke a bụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta Samsung dị ọnụ ala
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ Samsung dị ọnụ ala, egbula oge. Samsung Galaxy J7 2016 na-efu ihe na-erughị euro 250. Nke a bụ nyocha anyị mgbe ejiri izu abụọ were ya
Nyochaa Audbos DB-01, ekwe ntị dị elu na ntị dị elu maka ire ere maka 49,99 Euros
Anyị nyochara Audbos DB-01, ekwe ntị na-ere na Amazon maka naanị 49.99 Euro. A nkụchi obi wụnyere ekweisi na adịchaghị emecha.
Samsung Galaxy S8 Review: Dị Ọcha mara mma, ma na-ezughị okè
Echefula nyocha nke Galaxy S8 nke anyị nwalere atụmatụ nke Samsung Samsung ọhụrụ. Ọ bara uru? Olee otú ị pụrụ isi meziwanye ihe? Chọpụta!
Anyị nwalere MIUI 8.2, Xiaomi na-eweta obere akụkọ
Mgbe otu izu na-eji ụdị ọhụrụ nke MIUI anyị nwere ike ikwu na enweghị ezigbo akụkọ, ikekwe ụfọdụ iche.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ewere akụkụ ahụ mara mma mgbe ha zụrụ otu ma ọ bụ nke ọzọ ...
Nyocha miri emi nke UMIDIGI Z PRO, igwefoto igwefoto abụọ dị na etiti ga-eju gị anya
Lee, ahapụrụ m gị nyocha zuru ezu nke UMIDIGI Z Pro, ihe ngwanrọ gam akporo abụọ igwefoto na ọnụahịa ị gaghị enwe ike ikwere.
Chọpụta nyocha nke Ulefone Gemini, nke dị n'etiti etiti ya na igwefoto abụọ yana ihuenyo 5,5-inch na € 117. Chọpụta atụmatụ niile.
Gugul weputara ihe nlere nke ihe gam akporo 3
Google weputara uzo ihe nlere nke ato nke ihe gam akporo ihe maka ndi mmepe ya na ihe ohuru nke gha eme ka oru di nma
Obi abụọ adịghị ya, Nintendo gburu Super Mario ya na onye na-agba ọsọ a nke ị ga-echegbu onwe gị maka ịnakọta mkpụrụ ego. Nanị ihe mmechuihu.
Gam akporo O Mmepụta Preview: All news so far
Anyị na-egosi gị akụkọ niile na ọrụ nke ụdị beta mbụ maka ndị mmepe (Mmepụta Mmepụta) nke sistemụ arụmọrụ gam akporo O na-esote.
Ihe kacha mma gam akporo kiiboodu a na-akpọ Gboard, ọ sitere na Google na nke a bụ ihe ọ na-enye anyị
Y’oburu n’acho ochicho kacha mma Android, echefula isiokwu a tinyere vidio ka m na-egosi gị ihe niile Gboard na-enye anyị, ugbu a yana onye ntụgharị oge.
Nyochaa Wavefun X-Buds ekweisi na nchekwa IPX7 nke 69 Euro ugbu a maka naanị 22 Euro
Lee ị nwere nyocha zuru ezu na Spanish nke ekweisi Wavefun X-Buds ndị a, ekweisi mmiri na ọsụsọ na-erughị 25 Euro.
[APK] Facebook Flash, ngwa nke na-abịa na mpi na Snapchat na nke ahụ dị mma
N'ebe a ma ọ bụ m hapụ ngwa nke Facebook Flash, ụdị Facebook dị ka Snapchat nke ị ga-enwe nnukwu oge ịkekọrịta akụkọ gị.
Glide, ngwa nkata vidiyo dị iche ị ga-ahụ n'anya
Lee, m ewetara gị ihe bụ mmetụta nke oge a, ngwa nke nwere aha Glide ga-enye anyị ohere ịme nkata vidiyo n'ụzọ dị iche.
EOZ Otu, anyị nwalere ekweisi Bluetooth ndị a dị ịtụnanya
Analysis na Spanish nke EOZ One, a Bluetooth ekweisi na adịchaghị kwuchara na a nnọọ ezigbo mma àgwà na a demolition price
Kpachapụ anya na egwuregwu egwuregwu egwuregwu na-agaghị ekwe omume
Hocus bụ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya maka gam akporo na mazes na echiche na-agaghị ekwe omume nke ga-abụ ezigbo nsogbu maka ụbụrụ gị.
Ndetu ndetu ozugbo na gị gam akporo ngosi ngosi
Ngwa nke n’enyere anyi aka iwere ihe ndi edeturu ozugbo na ihe ngosi ngosi nke gam akporo gi.
Nest Analysis: Thermostat nke Gbanwere Iwu nke Egwuregwu
Anyị na-anwale akwu, smart n'ụlọ thermostat ịchịkwa gị kpo oku ọzọ rụọ ọrụ nke ọma, ọ bụ kwesịrị ya?
ZTE Blade V8, nyocha na uche
Nyocha na Spanish nke ZTE Blade V8, ekwentị dị n'etiti etiti na-apụta maka ogo ya na igwefoto ya nke na-enye ohere ịse foto na 3D
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ ahụ na-amasị ọnụ na nnukwu ihuenyo mana mmefu ego gị siri ike, ...
Sọpụrụ 5X, nyocha na echiche
Ihe nyocha vidiyo na Spanish nke Honor 5X, okwu ugwo nke na-efu euro 199 ma nwee ụfọdụ atụmatụ na-adọrọ mmasị na imewe
Ihe ndị a bụ mmetụta m banyere Rome Nougat mbụ maka Samsung Galaxy S6 Edge Plus. A Rom nke m gosipụtara gị izu gara aga ebe a.
Egwuregwu nkịtị 2 nke ga-ejide gị
Anyị ga-eji egwuregwu nkịtị abụọ ga - ejide gị na egwuregwu mbụ, nke nwere echiche na onye ọzọ nwere nka na ụdị Flappy Bird dị ọcha.
Nkọwa nke Bethesda Pinball, nnukwu nzọ ọzọ sitere na ụlọ egwuregwu vidio na-adọrọ adọrọ
Bethesda na-ekpughere anyị ọzọ na ọ maara otu esi eme egwuregwu dị oke mma, agbanyeghị na Bethesda Pinball a na mmekorita ya na Zen Studios.
Analysis Samsung Galaxy J5, ihe ntinye di iche na onu ogugu
Nyocha na Spanish nke Samsung Galaxy J5 2016, ekwentị ntinye na ihuenyo AMOLED na etiti aluminom
Sọpụrụ 8, nyocha na echiche
Nkọwa nke Honor 8, ekwentị dị oke mma nke nwere mma mara mma yana atụmatụ ndị na-eto ya na mpaghara ahụ
WTF?! Smart Ọkà okwu, a obere ọkà okwu na a button na-selfies
Nnyocha na nyocha nke WTF Smart Ọkà Okwu, ọkà okwu a na-achọsi ike na blu Bluetooth nke nwekwara ọrụ na-akpalite igwefoto nke ekwentị ma ọ bụ mbadamba anyị.
Kacha ọhụrụ gam akporo Wear 2.0 Dev Preview gụnyere nkwado iOS
Gam akporo Wear 2.0 ga-enye nkwado dịka akọwapụtara na mmelite ọhụụ ọhụụ tupu ọ malite na February.
LG X Power bụ njedebe nke dabere na nnukwu nnwere onwe ya site na ikwe ka awa 8 nke oge nyocha. Anyị na-enyocha ya ọbụna na vidiyo
N'ịga n'ihu na nyocha anyị banyere njedebe Asia na nke dị n'etiti, oge a ọ bụ oge nke Oukitel ...
Anyị na-enyocha Uhans H5000, njedebe dị ala mana nke ahụ na-enye ụbọchị anọ nke nnwere onwe, 4 GB nke RAM na 3 GB ROM maka naanị € 32. Chọpụta ya!
N'ịga n'ihu na nyocha anyị ama, taa ọ bụ ntụgharị nke Doogee Y6 Piano Black, mbipụta pụrụ iche na ...
Nyochaa nke keyboard foldable Bluetooth site na Teknụzụ EC, keyboard iji soro gị gaa ebe niile
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke keyboard na folda bluetooth, dị oke akụ na ụma ọ bụ ezie na nke ahụ apụtaghị na ọ dị oke mma.
Nyocha Bluboo Edge: ihuenyo gbagọrọ agbagọ na ihe mmetụta obi
Nnyocha nke Bluboo Edge, smartphone dị ọnụ ala nke China nke naanị € 128 na-enye gị nnukwu imewe, ihuenyo gbagọrọ agbagọ na ihe mmetụta obi. Want chọrọ ya?
Netatmo Presence, nke a bụ igwefoto Netatmo n'èzí
Anyị na-enyocha igwefoto Netatmo Presence, ngwaọrụ nke pụtara maka ọhụhụ nchoputa algorithm yana usoro ngosi zuru oke
Syllable D900 Obere, anyị nyochachara ekweisi Bluetooth ndị a na-enweghị eriri
Nyocha na Spanish nke ekweisi Syllable D900 Mini, ekweisi ikuku na nke nwere onwe ha nwere ụdị atụmatụ ọ bụla.
ZTE Axon 7 ghọrọ onye kachasị mma kachasị dị elu maka uru ego bara, ekele maka ọnụ ahịa ya na ịdị oke ọnụ
Nnyocha vidiyo nke Meizu M3 Rịba ama, ọhụụ ọhụụ nke rụpụtara nke na-apụta ìhè maka ogo nke mmecha ya, ihuenyo na ọnụego gbanwere.
LG Tone Infinim, anyị nwalere ekweisi LG chọrọ ịmata
Nyocha vidiyo nke igwe okwu LG Tone Infinim, ngwaọrụ dị mma ma dị mma nke na-eju anya na ogo ya.
Uhans A101s, anyị nyochaa ekwentị a na-efu 60 euro
Nyocha vidiyo na Spanish nke Uhans A101s, ekwentị nke na-efu euro 60 na nke ahụ ga-egbo mkpa onye ọrụ ọ bụla.
Nyocha Elephone S7, ọnụ na nnukwu ọnụahịa
Anyị na-enyocha Elephone S7, ihe ngwanrọ gam akporo mara mma nke nwere ihe na-erughị € 200 na-enye atụmatụ ihu, 4 GB nke RAM na 64 GB nke ROM. you ga-atụ uche ya? Anaghị m!
Nyochaa Cubot Cheetah 2. IWU !! Naanị 126 Euro ka ọ bụrụ onyinye zuru oke maka Ndị Eze
Taa, m na-ewetara gị nyocha vidiyo nke Cubot Cheetah 2, njedebe gam akporo m hụrụ n'anya yana ana m akwado dị ka onyinye sitere n'aka ndị eze.
Nyocha miri emi nke Weimei We Plus 2
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha vidiyo miri emi nke Weimei We Plus 2, njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Spanish nke chọrọ inweta akara na ahịa